I-Oukitel iya kuqala uluhlu olutsha oluMncinci nge-Y4800 kunye nekhamera yayo ye-48 mpx | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Abafana abavela e-Oukitel bazisa izixhobo ezahlukeneyo kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali unyaka wonke. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi inkampani yaseAsia ifuna ukwandisa inani labathengi abanokubakho kunye nezicwangciso zokuphehlelela uluhlu olutsha lwezixhobo phantsi kwegama Oselula. I-Oukitel Y4800 iya kuba yimodeli yokuqala yokufika kwintengiso.
Uchungechunge olutsha lwe-Oukitel Young lujolise kwimfashini nakwindlela entle ngelixa lijolise kuluntu oluncinci, ke sinokulindela uyilo olunomtsalane kakhulu kwaye sigqibe. Kodwa eyona nto inomtsalane siya kuyifumana ngasemva, ngakumbi kwicandelo lokufota, ukusukela Iya kusivumela ukuba sithathe indawo ngesisombululo esiphakamileyo kakhulu sibulela kwi-48 mpx yekhamera yayo ephambili.
I-Oukitel Y4800 iya kuba neelensi ezimbini ngasemva, iphambili ye-48 mpx kunye ne-5 mpx yesibini. Iseti iya kulawulwa yinkqubo yeArtificial Intelligence. Ikhamera entsha ye-48 mpx Ayijolisanga ekunikezeleni imifanekiso emikhulu, kodwa iya kusinika namava obuchule bokufota, njengoko kuchaziwe ngumenzi. Ngaphambili, siya kufumana inzwa ye-16 mpx, enekona ebanzi, efanelekileyo ukuthatha iifoto zeqela.
Uthotho olutsha aluzukusinika kuphela ikhamera eguqukayo, kodwa luyakusinika amandla amaninzi, kuba ngaphakathi, siyakufumana iprosesa. IHelio P60C evela kwiMediaTek, ihamba ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina.
Isikrini asikude kakhulu kwaye i-Y4800 isinika iscreen se I-intshi ye-6,3 ene-FullHD + isisombululo. Isikrini sinethontsi elincinci phezulu apho sifumana khona ikhamera yangaphambili. Iqela liphela liya kulawulwa yi-Android Pie.
Nangona okwangoku singazi ukuba kucwangciselwe ukwaziswa nini kwintengiso, le modeli yenzelwe yona uthengise kakhulu, Kuba ixabiso layo, njengazo zonke izixhobo esinikwa yile nkampani, ihlala iqinile kakhulu. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngale fowuni unokulandela inkampani kuFacebook ngale khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » I-Oukitel iya kuqala uluhlu olutsha oluMncinci nge-Y4800 kunye nekhamera yayo ye-48 mpx